N'ime ihe karịrị 140 kwuru, ụdị kọntaktị WordPress na Nchedo Spam abụrụla, ihe kachasị ewu ewu nke m nyeere aka ịzụlite. E meela ya iri puku kwuru iri puku na post bụ ihe kachasị ewu ewu na weebụsaịtị m. Enwetala m ọtụtụ nzaghachi na ngwa mgbakwunye ma mechaa kpebie ime ya, na-etinye ọnụ niile ndụmọdụ ndị ndị na-agụ akwụkwọ m nwere!
Ọ bụrụ na ị nweta nkwalite na mbipute a (2.0.0), biko mara na ị ga-agbanwe koodu ahụ na Kpọtụrụ Kọntaktị gị na-etinye koodu ahụ. Ọ na-abụbu okwu, ugbu a ọ bụ eriri nnọchi anya.